> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga saari Media
Waxaan soo kaban karto, tirtiray Faylal ay ka Media saari karo?
Waxaan leeyahay saari USB flash ah oo qaar ka mid ah shuqullada sawir aan qabaneysa. Nasiib darro aniga iyo kid si qalad ah tirtiray oo dhan oo iyaga ka mid. Aad u mashquul loo wareejiyo aan computer waxaan ahaa. Ma jiraan qaar ka mid ah xal inuu ka soo kabsado sawirada aan tirtiray ka? Thanks.
Warbaahinta saari karo waxaa inta badan loo isticmaalo kaydinta xogta maalmahan. Si kastaba ha ahaatee, xogta warbaahinta saari karo waxaa laga yaabaa in sababta loo waayey tirtirka, formatting, jeermiska fayraska ama xitaa baadi nidaamka. Marka files yihiin lumay warbaahinta saari karo, aan run ahaantii la waayay. Waxay ku calaamadeysan yihiin xogta geli karin oo sugi doonto xogta cusub si ay u overwrite. Taas macnaheedu waa in aad sida macquulka ah soo kaban karto, xogta laga warbaahinta saari karo ilaa iyo inta xogta aan overwritten.
Si aad u soo kabsado xogta laga warbaahinta saari karo, inaad si fiican u joojin lahaa isticmaalka iyo raadiyo barnaamij warbaahinta saari kabashada xogta si ay kuu caawiyaan. Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa qalab sida u saamaxaya in aad ka bogsato xogta ka dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta saari karo, oo ay ku jiraan baabuur dibadda adag, USB drive, kaadhka xusuusta, iwm Sidaa daraadeed, ayaad ugu soo ceshano karaan faylasha sida sawirada, videos, dokumenti files, files audio iyo ka badan oo ka qalab lagu kaydiyo saari karo.
Hel version tijaabo ah inuu ka soo kabsado xogta laga warbaahinta saari hadda!
Qabtaan Media saari Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Waxaan u oofin doonaa dib u soo kabashada la Windows version of Wondershare Data Recovery. Oo waxyaalahaas ka hor waxaan aad u hesho waxa ay bilowday, fadlan hubi in warbaahinta aad saari noqon kartaa si fiican u xiran your computer.
Tallaabada 1 Select hab kabashada si ay u bilaabaan soo kabashada xogta warbaahinta saari karo
Bilow Wondershare Data Recovery on your computer oo aad arki doonaa interface ah sida sawirka hoose.
Halkan waxa aad ka qaadan kartaa "lumay Recovery File" mode sida isku day ah.
Tallaabada 2 Sawirka warbaahinta aad saari karo in la raadiyo files lumay
In tallaabadaas, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan warbaahinta aad saari karo oo guji "bilow" button in aynu barnaamijka waxa laga baarayo.
Haddii files warbaahinta aad saari karo ayaa laga badiyay sababta oo ah formatting, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho Faylal ay ka saari Media
Ka dib markii iskaanka, dhammaan waxyaabaha la marsiiyey warbaahinta aad saari lagu soo bandhigi doonaa "Nooca File" ama qaybaha "Jidka". Waxaad ka arki kartaa magacyada file si loo hubiyo in xogta aad badiyay la kama uusan soo kabsan karaan ama. Waxa kale oo aad awood u yeelan doonaan in ay sidoo kale ku eegaan helay images.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan files aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Si looga hortago faylasha recoverable ka overwritten, fadlan ha ka dib waxaan iyaga ku badbaadin si aad warbaahinta saari karo inta lagu jiro dib u soo kabashada.
AmazonBasics Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Faylal ay ka AmazonBasics